လှိုင်သာယာဖိနပ်စက်ရုံတိုက်ပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လှိုင်သာယာဖိနပ်စက်ရုံတိုက်ပွဲ
Posted by student on Feb 15, 2012 in Copy/Paste | 22 comments
လှိုင်သာယာကတိုင်ရီဖိနပ်ချုပ်စက်ရုံယနေ.အထိလိုချင်သော လခ ရဖို.အတွက် ယနေ.အထိ ဆန္ဒပြတိုက်ပွဲ
ငါတို့ လဲ ပွိုင့်တိုးပေးဖို့သဂျီးနှစ်လုံးပြူးလုပြီး တိုက်ပွဲဝင်ကြစို့ 
ဟုတ်၏ …၊ မှန်၏ ..၊ ကျွန်ုပ်လည်း ပါ၏ …။
လူမိုက်ကား ပေါက်ဖော် ဖြစ်၏၊ အဖော်ကား အံစာတုံး ဖြစ်၏ … ။
တတ္တိရှိရင် ဖျဲသီးနဲ့ ဖိုက်မလား
ဗိုလ်စိန်ပေါက် ရှေ့ကသွားရင် နောက်ဆုံးက ဟေးလေးဝါးလားလုပ်ပြီး လိုက်ခဲ့ပါ့မယ်။
(သဂျီးဆီက တန်ပြန်တိုက်စစ်လာရင် ရှေ့ဆုံးက ပြေးပါ့မယ်။)
အဆိုးမြင် ၀ါဒီများအား ချီးထုပ်နဲ့ ပေါက်ကြ
မောင်ပေ့ အားကိုး ငမျောက်ဆိုး
ခွက်ပုန်းကစ်သူများအား ဆန့် ကျင်ကြ
အောင်မလေးတော်ရေ …. ဆန္ဒပြတာ တစ်ရက်မဟုတ်ဘူး… ငါးရက်ကျော်ပြီ … ။
သိပ်ဝါသနာပါလျှင် ကိုယ်တိုင် လာရိုက်နော် …. ။ ဆန္ဒပြတဲ့ အချိန်မှာ .. အဲ့ဒီလမ်းကို ၀ါးလုံးတွေနဲ့ တားပြီး ပိတ်ထားတယ် … ။ အဲ့လမ်းဖြတ်ချင်လျှင် .. စစ်လား ဆေးလားနဲ့ ဘယ်စက်ရုံကလဲ .. ဘယ်ဌာနကလဲ ရစ်သေးတာ … ။
ကျုပ်ကတော့ .. သူတို့ ဆန္ဒပြတာ .. ဓါတ်ပုံအရိုက်ကောင်းလို့ …တစ်ခါ ခံလိုက်ရကတည်းက မှတ်သွားပြီ … ။ မန်မိုရီကဒ် အသိမ်းခံလိုက်ရကတည်းက … ခံပြင်းနေတာ .. အခုချိန်ထိပဲ … ။ အဲ့ဒီစက်ရုံ ခဏခဏ ဆန္ဒပြတယ် … ။
အဲတုန်းက ပုံလေးကော ရှိဘူးလား ညီမလေး.. တင်ပေးပါလား…မြင်ဖူးချင်လို့ပါ။
အစ်မမနောကလည်း .. ဂျောက်ဂျက်ကွယ် …. စာလည်း သေချာမမှတ်ဘူး … ။
ရိုက်တုန်း မိသွားလို့ ကဒ်သိမ်းပါတယ်ဆိုမှ … ဘယ်မှာ ရှိတော့မှာလည်း …. ။
အဲ့ဒီတုန်းက ညံ့ လို့ …. တစ်သက်စာ အမှတ်တရပုံတွေပါ ပါသွားခဲ့တယ် …. ။
ပြန်ပြောရင် ဒေါကီးတယ် … ။ ဟွန်း :mad:
ဟိုဘက်ကောမန့်ပြန်ကူးမယ်။ တုန်တုန်ရေ အာကို့ တပုံလောက်လို့ရှိုပြီးရိုက်ခဲ့ပါရား။
ဟရေး….ကန်ကလေး….ကုလားနော်….ခင်လို့ ပြောဒယ်နော……. ။
ကန်ကလေး ကိုယ့်ကိုယ်ကို Upgrade လုပ်သင့်ပီနော ။
၁ ။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တော်ဝင်စင်တာမိသားစု
၂ ။ မြန်မာနိူင်ငံစက်သုးံဆီတင်သွင်းရောင်းချဖြန်.ဖြူးရေးအသင်းတိုင်ကြားပေးပါ
၃ ။ ဥပဒေအမျိုးမျိုးထုတ်ပြန်တဲ.တော်စင်တာ
၄ ။ ကားပွဲစားတန်းကဟံသာဝတီ ဝေလုဝန်ဆက်သွယ်ရေးအိန်ချိန်း မီးလောင်
(ကန်ကလေး ကုလားလောက်တောင် ဗမာစကား မတတ်ဘူးနော )
၅ ။ လှိုင်သာယာဖိနပ်စက်ရုံတိုက်ပွဲ
စတဲ့ အတင်းအဖျင်းလိုလို သတင်းလိုလို ညွှန်းသလိုလို ပစ်စာတိုင်စာလိုလို
ပိုစ့်တွေ နဲ့ကန်ကလေး ကို သတိထားမိတယ် ။
ပိုက်ဆံ ကုန်ရကျိုးလဲ နပ်အောင် ကိုယ်တိုင်လည်း ပင်ပန်းရကျိုးနပ်အောင်
စာဖတ် ပရိတ်သတ်အနေနဲ့ လည်း တခုခု ရသွားအောင် ဒီထပ်ပိုပြီး နည်းနည်းလောက်
Upgrade လုပ်ကြည့်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ် ။
ရန်ကုန်တိုင်း ၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ တိုင်ရီဖိနပ်စက်ရုံက အလုပ်သမားတွေရဲ့ လုပ်အားခ တိုးပေးရေး ဆန္ဒပြမှုကို အစိုးရရဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနက ညွန်ကြားရေးမှူးကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ပြေလည်မှု မရခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
တပတ်ကြာ ဆန္ဒပြနေတာ ပြေလည်မှုရဖို့ ဒီနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက တိုင်ရီဖိနပ်စက်ရုံဝင်းထဲမှာ အလုပ်ရှင်ဘက်က ကိုယ်စားလှယ်၊ အလုပ်သမားတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ နေပြည်တော်က အလုပ်သမားရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးချစ်ရှိန်တို့ ဆွေးနွေးပေမယ့် ပြေလည်မှု မရခဲ့ပါဘူး။
အလုပ်သမား တွေဘက်က မူလတောင်းဆိုချက်ထက် လျှော့ပြီး တောင်းဆိုမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် အလုပ်ရှင်ဘက်က နဂိုအတိုင်းပဲ တင်းခံနေလို့ ပြေလည်မှု မရခဲ့တဲ့အကြောင်း အလုပ်သမားတွေဘက်က ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေးက ပြောပါတယ်။
“အလုပ်သမား တွေကတော့ အများကြီး လျှော့ပါတယ်။ ပထမဆုံး သူတို့ အလုပ်ရုံမှာ ဆန္ဒစပြတဲ့နေ့က တောင်းဆိုတာက နေ့စားခ ၇၅ ကျပ်ကို ၂၅၀ ကျပ် ထိ ပေးဖို့ရယ်၊ နောက် သုံးရက်လောက် ဆန္ဒပြပြီးတော့ အလုပ်သမားတွေက အလုပ်ရှင်ကို ငဲ့ညာတဲ့အနေနဲ့ ၇၅ ကျပ်ကို ၁၅၀ ထိ လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကျတော့လည်း အလုပ်သမားတွေက နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပြေလည်စေချင်တဲ့ သဘောနဲ့ သူတို့ဘက်က အများကြီးလျှော့ပေးခဲ့တာ တွေ့ရတယ်။ ဒီနေ့ ကျမ သိရတာကတော့ အလုပ်သမားတွေက တော်တော်လေး ဒုက္ခရောက်နေပြီ။ မဆင်းရတဲ့ ရက်တွေက များတဲ့အတွက် အိမ်ကို ပိ်ုက်ဆံပြန်ယူရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ဆိုလည်း ဖယ်ရီခကို အလုပ်ရှင်က မပေးတော့ဘူး။ သူတို့ဘာသာ လိုင်းကားနဲ့ လာရတယ်၊ ပိ်ုက်ဆံမရှိတဲ့သူက လမ်းလျှောက်လာခဲ့ရတယ်၊ အလုပ်သမားတွေက အရမ်းကို နစ်နာနေတာ ကျမတို့ တွေ့ရတယ်၊ စိတ်လည်း မကောင်းဘူး။”
ဆွေးနွေး ပွဲမှာ အလုပ်သမားတွေက လုပ်အားခကို နဂိုက တနာရီ ၇၅ ကျပ် ပေးနေတာကို ၁၀၀ ထိတိုးပေးဖို့၊ ရက်မှန်ကြေး နဂိုက ၆၀၀၀ ပေးနေတာကို ၈၀၀၀ ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အလုပ်ရှင်ဘက်က တနာရီကြေးကို ၈၅ နဲ့၊ ရက်မှန်ကြေးကို ၇၀၀၀ အထိပဲ တိုးပေးမယ်လို့ ပြောတာကြောင့် ပြေလည်မှုမရခဲ့ပါဘူး။
အခုလို ပြေလည်မှု မရတဲ့အတွက် အလုပ်သမားတွေကတော့ သူတို့ တောင်းဆိုချက်တွေ ရအောင် အလုပ်မဆင်းဘဲ ဆန္ဒပြမှာဖြစ်သလို၊ ဥပဒေကြောင်းအရလည်း တောင်းဆိုသွားဖို့ စီစဉ်နေကြပါတယ်။
လူ့အခွင့်အ ရေးလှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေးကတော့ အခုကိစ္စမှာ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားတွေ နှစ်ဘက်စလုံးက နစ်နာတာတွေ မဖြစ်အောင် အစိုးရက ကြားဝင် ဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“အလုပ်သမား တွေက ၁,၈၀၀ ကျော်၊ ယောကျာ်းလေးအလုပ်သမားတွေက ၁၀၀ တောင် မပြည့်ပါဘူး။ မိန်းကလေးက ၁,၇၀၀ ကျော် လောက်ရှိတယ်။ အဲဒီ့ အမျိုးသမီးတွေက အပျိုလေးတွေပါသလို၊ အိမ်ထောင်ရှင်တွေလည်းပါတယ်။ ကားလမ်းမပေါ်မှာလည်း အိပ်လို့မရပါဘူး။ ဘူတာရုံမှာလည်း အိပ်မရပါဘူး။ အပြင်မှာထွက်ပြီး ညလုံးပေါက် လမ်းလျှောက်နေလို့လည်း မရဘူး။ အဲတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝလုံခြုံရေးကို နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကော၊ အလုပ်သမား ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်ကော အာဏာပိ်ုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကကော ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် အလုပ်သမား အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝလုံခြုံရေးကို ကျမတို့ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ အာဏာပိ်ုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ နိုင်ငံတော်သမ္မတတွေကနေ ဒီ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမား နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကို တဦးနဲ့တဦး မနစ်နာအောင် ပြေပြေလည်လည် ဖြေရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်။”
မနှစ်တုန်း လည်း တိုင်ရီ ဖိနပ်စက်ရုံမှာ အလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒပြမှုကို အလုပ်သမားညွန်ချုပ် ဦးချစ်ရှိန်ကပဲ ကြားဝင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လို့ ပြေလည်မှု ရခဲ့ဖူးတယ်လို့ အလုပ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အခုအချိန်အထိ ရှိနေတဲ့ အလုပ်သမားဥပဒေဟာ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးတွေကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်မှု အားနည်းပြီး၊ အစိုးရ အလုပ်သမားဌာနတွေကလည်း အကာအကွယ်ပေးတာမျိုး မရှိသလောက်ပဲလို့ အလုပ်သမားအရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ဆိုကြပါတယ်။
မကြာခင်က ဒီဗွီဘီနှင့် မေးမြန်းခန်းမှာ အလုပ်သမား ဒုဝန်ကြီး ဦးမြင့်သိန်းက လွတ်လပ်တဲ့ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေ ဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့ အကန့်အသတ်နဲ့ ဆန္ဒပြခွင့်တွေ ပါဝင်တဲ့ အလုပ်သမား ဥပဒေသစ် တရပ် ဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ အသက်ဝင်လာဖို့ ရှိတယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
ပြီးသွားပြီ မောင်ကျောင်းသားရေ ။
တိုင်ရီ ဖိနပ်စက်ရုံ အလုပ်သမား​ ဆန္ဒပြပွဲ ပြီး​ဆုံး​
ရန်ကုန်တိုင်း ​ လှိုင်သာယာမြို့​နယ်က တိုင်ဝမ်နိုင်ငံသား​ပိုင် တိုင်ရီ ဖိနပ်စက်ရုံမှာ အလုပ်သမား​တွေက
လုပ်အား​ခတိုး​ပေး​ဖို့​ဆန္ဒပြ​တောင်း​ဆိုချက်ကို သီတင်း​ တပတ်​ကျော် အကြာမှာ အလုပ် ရှင်ဘက်က လိုက်​
ဖေ​ဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် မွန်း​လွဲပိုင်း​မှာ အလုပ်ရှင်နဲ့​ အလုပ်သမား​တွေအကြား​ သ​ဘောတူညီမှုရခဲ့​တာပါ။ ဒီသ​
ဘောတူညီချက်အရ အလုပ်သမား​တွေ ​တောင်း​ဆိုတဲ့​ အတိုင်း​ တနာရီ ကို အရင်က ၇၅ ကျပ် ရရှိရာက​
နေ လုပ်ခ ကျပ် ၁၀၀ ရရှိခဲ့​ပြီး​ အချိန်ပို တနာရီ ၁၆၄ ကျပ်နဲ့​ တလအတွင်း​ ရက်မှန်​ကြေး​ နဂိုအတိုင်း​ ကျပ်
၆၀၀၀ နှုန်း​ ရရှိခဲ့​တယ်လို့​ အလုပ်သမား​တွေဘက်က လိုက်ပါ​ဆောင်ရွက်​ပေး​သူ ​ရှေ့​နေ ကိုဖိုး​ဖြူက ​
ခုလို သ​ဘောတူညီချက် ရခဲ့​လို့​ အလုပ်သမား​တွေဟာ အရင်ကထက် တလကို လစာ ကျပ် (၁)​သောင်း​
ကျော် ပိုရလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်သမား​တွေဟာ အရင်က တလကို အချိန်ပို​ကြေး​၊​ ရက်မှန်​ကြေး​ အပါအဝင် ပျမ်း​မျှ ကျပ် ၃၇,၀၀၀ ​
အလုပ်သမား​ တွေဟာ လုပ်အား​ခ တိုး​မြှင့်​ရရှိ​ရေး​အတွက် ​ဖေ​ဖော်ဝါရီ ၆ ရက်​နေ့​ မနက်ပိုင်း​ကစပြီး​ ဆန္ဒပြ​
နေကြတာပါ။ မ​နေ့​က​တော့​ အစိုး​ရ အလုပ်သမား​ရေး​ရာဝန်ကြီး​ဌာနရဲ့​ ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​
ကိုယ်တိုင်အလုပ်ရှင်နဲ့​ အလုပ်သမား​အကြား​ ဝင်​ရောက် ​ဖြေရှင်း​ပေး​ခဲ့​ပေမယ့်​ မ​ပြေလည်ဘဲ ဒီက​နေ့​မှာ
အလုပ်သမား​တွေရဲ့​ ​တောင်း​ဆိုမှု​တွေ ရရှိခဲ့​တာပါ။
တိုင်ရီ ဖိနပ် စက်ရုံကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်က တည်​ဆောက်ခဲ့​ပြီး​ တိုင်ဝမ် သူ​ဌေး​ တဦး​ပိုင် ကာ တရုတ်အမျိုး​သမီး​
တဦး​က စီမံခန့်​ခွဲ​နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးသွားပြီဆိုလျှင် ဘာလို့ မနက်က အပြင်မှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာတွေ တွေ့နေရသေးတာလဲ … ။
နေပူဆာ လှုံ နေတာ ထင်ပါ့ …
ဒေါ်အီးတုံး … မနက်ကနှင်းတွေကျတယ် မဟုတ်လား … အဲဒါ အလုပ်သမားတွေက ချမ်းလို့ အပြင်မှာ နေပူဆာထွက်လှုံ နေတာလေ …
ရန်ကုန် လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုံရှိ တိုင်ရီ ဖိနပ်စက်ရုံ အလုပ်သမား ၁၈၀၀ ခန့်က ၎င်းတို့ တောင်းဆို ထားသည့် လိုလားချက်များ မရသေးသည့် အတွက် ၁၀ ရက် မြောက်နေ့အဖြစ် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆက်လက် ဆန္ဒပြနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တိုင်ရီ ဖိနပ်စက်ရုံအလုပ်သမားများ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ယမန်နေ့က အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် ၃၈ ဦးတို့ ညှိနှိုင်းရာတွင် အချိန်ပိုကြေး တနာရီ ၇၅ ကျပ်မှ ၁၅၀ ကျပ် တိုးမြှင့်တောင်းခဲ့သည်ကို ၂၅ ကျပ်သာတိုး၍ ၁၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ရက်မှန်ကြေး ၆၀၀၀ ကျပ်မှ ၈၀၀၀ ကျပ် တိုးမြှင့်တောင်းထားသည်ကိုလည်း လုံးဝ တိုးမပေးကြောင်း၊ ထို့အပြင် စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးရမည့် အချက်အလက်များနှင့် လုံးဝ ခြားနားနေသောကြောင့် ဆက်လက် ဆန္ဒပြရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမားတဦးဖြစ်သူ ကိုမျိုးမင်းသိန်းက ဧရာဝတီကိုပြောသည်။
အလုပ်သမားများအား အချိန်ပိုကြေး ၇၅ ကျပ်မှ ၁၀၀ ကျပ် အထိ တိုးပေးသည်ကို အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ် တဦး၏ ပြောစကားအရ ၁၀၀ ကျပ် ထပ်တိုးပေးသည်ဟု ထင်မြင်ခဲ့မိ၍ အလုပ်သမားအများစုက တနာရီ အချိန်ပိုကြေး ၁၇၅ ကျပ်ဟု မှတ်ယူမှားခဲ့ရာ ယနေ့နံနက် စက်ရုံရှေ့သို့ လာရောက်မှ အဖြစ်မှန်ကို သိရသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
သို့သော် အလုပ်သမား ၁၅ ဦးခန့်သည် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေ၍ အချိန်ပိုကြေး ၂၅ ကျပ် ထပ်တိုးပေးသည်ကို လက်ခံကာ ယနေ့မှစတင် အလုပ်ပြန်ဆင်းကြောင်း သိရသည်။
ယခုလက်ရှိတွင် အလုပ်သမများ နေထိုင်ရာ အဆောင်များ၌ အလုပ်ရှင်၏ လူယုံများက ခြိမ်းခြောက်မှုရှိနေကြောင်း၊ စနေနေ့အထိ အလုပ်မဆင်းပါက အဆောင်မှ ဖယ်ရှားမည်၊ အလုပ်မှ ရာသက်ပန် ထုတ်မည်ဟု ပြောကြောင်း အလုပ်သမားများက ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ မနက် ၆ နာရီကတည်းက စက်ရုံရှေ့မှာပဲ ဆန္ဒပြတယ်။ အာဏာပိုင်တွေဘက်က ဘာမှ ခြိမ်းခြောက် တာတော့ မရှိသေးဘူး။ ကျနော်တို့ အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်ရှင်ဘက်ကပဲ ခြိမ်းခြောက်နေတာပါ” ဟု ကိုမျိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။
အလုပ်ရှင်၏ တရားဥပဒေမဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ အလုပ်သမား ရပိုင်ခွင့်များကို မျက်ကွယ်ပြုနေမှုများ အတွက် အလုပ်သမား ပြဿနာဖြေရှင်းရေး ၀ါဏိဇ္ဇ ခုံရုံးသို့ ဥပဒေကြောင်းအရ တင်ပြတိုင်ကြားသွားရန် အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ် ၄၆ ဦးကို ရွေးချယ်ထားပြီး ဥပဒေရေးရာ အကူအညီပေးသူ ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူကို ကူညီပေးရန် ပြောဆိုထားသည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ဆန္ဒပြမှု ၆ ရက်မြောက်နေ့က အလုပ်သမား ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးချစ်ရှိန်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ခဲ့သော် လည်း မပြေလည်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခု အလုပ်သမားများ၏ နစ်နာချက်များကို အချက် ၁၇ ချက်နှင့်တကွ တင်ပြတောင်းဆို ထားသော်လည်း အလုပ်ရှင်ဘက်က ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်းသေးသည်မှာ ရက်ကြာသည်နှင့်အမျှ အလုပ်သမား များ စားဝတ်နေရေး ပိုခက်ခဲလာကြောင်း သိရသည်။
တိုင်ရီ ဖိနပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြမှု သတင်းကို ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ် များတွင် ဖော်ပြမှု အားနည်း နေကြောင်း ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူက ပြောသည်။
“သတင်းဂျာနယ်တွေက ဓာတ်ပုံလည်း လာရိုက်တယ်၊ အင်တာဗျူးတွေလည်း လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ပြောတာတွေ အပြည့်အစုံ ပါလာတာ မတွေ့ရဘူး” ဟု သူက ဆို
အင်းဗျ။ပြေလည်သွားဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်။သူတို့ ခမျာမလဲ လုပ်အားခကိုတိုးတောင်းနေတာ အကြိမ်မနည်း
တော့ဘူး။အလုပ်ရှင်ကဘဲ ကပ်နေသလား၊အလုပ်သမားတွေကဘဲ ပိုလွန်းနေသလား။ဒါပေမယ့်သေချာတာက
အလုပ်သမားတောင်းတာ မျှတပါတယ်၊အလုပ်ချိန် ၈နာရီ၊အချိန်ပိုကြေး မျှမျှတတဖြစ်သင့်တာပေါ့။